avylavitra · Avrily 2020 · Global Voices teny Malagasy
avylavitra · Avrily, 2020
Editor/Translator for Lingua Malagasy · Nanomboka nandika tamin'ny 10 Marsa 2008 · 2705 Lahatsoratra
Lahatsoratra farany an'i avylavitra tamin'ny Avrily, 2020
Taratasim-baovaon'ny RV: Topimaso amin'ny hamaroan'ireo sary mahatsikaiky atao amin'ny tenindreny
gazety 30 Avrily 2020
Ny gazetin'ny Rising Voices dia manome rohy mankany amin'ireo hetsika mila araraotina momba ny fampiatiana nomerika, anatin'izany ny fidirana sy ny fampiasàna ireo fitaovana nomerika, ary koa ireo fomba hafa sy hetsika hahafahan'ireo vondrompiarahamonina mandray anjara feno aty anaty aterineto.
Ao Meksika, fandaharanasa fanavotana tsy ampy hampihibohana ireo 30 tapitrisa miasa amin'ny sehatra ivelan'ny rafitra
Fahasalamàna 30 Avrily 2020
"Raha tsy mivarotra aho, tsy mihinana. Tsotra kely izany."
Hiadiana amin'ny COVID-19 ao Myanmar, antso iray hampitsaharana ny ady sy ny fanapahana aterineto ao amin'ny faritra Arakan
Azia Atsinanana 30 Avrily 2020
"Mandritra ilay valanaretina erantany, ilaintsika ny mampitsahatra ny ady sy ny fanapahana aterineto mba hiadiana amin'ny COVID-19 ao Rakhine."
Mazan-doha manohy mamono biby marobe atao fanatitra ho an'Andriamanitra ny ao Nepal
Azia Atsimo 29 Avrily 2020
Mbola tsy afaka ilay fomba fanao, na teo aza ny antso avo erantany manohitra ny fanaovana sorona biby ao Nepal.
COVID-19 hitondra zavadoza any amin'ireo fonja hipoka ao Brezila, efa nisy iray maty
Amerika Latina 29 Avrily 2020
Olona 750.000 no mihiboka any am-ponja ao amin'ilay firenena. Izy no fahatelo erantany manana olona betsaka indrindra any am-ponja, manaraka an'i Etazonia sy Shina.
Lahatsary vaovao ahitàna taratra ny anton'ireo fanafihana any avaratr'i Môzambika
Mozambika 29 Avrily 2020
Noraketina an-tsary avy tao amin'ny vohitr'i Ntchinga, asehon'ilay lahatsary ireo mpanafika milanja ny sainan'ny fanjakana islamika ary ny mpitarika iray miresaka amin'ny mponina ao an-toerana amin'ny fiteny Kimwan sy Kiswahili, mitangorona toy ny manatrika famoriana vahoaka.
Rosiàna mihiboka (mamerina) mamorona asakanto malaza ety anaty aterineto
Eoropa Afovoany & Atsinanana 28 Avrily 2020
Hafaliana tsy omby tratra ny an'ny RuNet, nahita Rosiàna an'arivony maro namerina namokatra ireo asakanto malaza tamin'ny alàlan'ireo fitaovana tsotra fampiasa andavanandro ao an-tokantrano - tamin'ny fomba mahatsikaiky sy indraindray hafahafa.
Na an-tsesitany aza, mbola mitoetra anatin'ny pôlitika bôliviàna ny dindon'i Evo Morales
Bolivia 27 Avrily 2020
Morales no tondroina ho atidoha ao ambadiky ny fanendrena an'i Luis Arce, ilay minisitry ny toekarena teo aloha, ho solontenan'ny MAS amin'ny fifidianana izay ho filohampirenena ho atao tsy hoe ela.
“Tsy azo inoana” ireo roa mpanao gazety nitatitra momba ny vola fanampiana amin'ny COVID-19 hoy ny minisitry ny polisy ao Papouasie-Nouvelle-Guinée
Oseania 22 Avrily 2020
"Tsy anjaran'ny minisitra ao amin'ny governemanta no mandray fanapahana na tokony horoahana na tsia ireo mpanao gazety, ary indrindra fa rehefa noho ny tatitra tsy lanin'ny vavoniny no antony."
COVID-19, mamely ireo vazimba teratany mpifindra monina ao Venezoelà ihany koa
Amerika Latina 17 Avrily 2020
Kely no mba zavatra fantatra mikasika ireny vehivavy miaina anatin'ny iray amin'ireo vondrompiarahamonina marefo indrindra ireny, satria izy ireny sady teratany, no mpifindra monina ary koa vehivavy.